China Jinan Single Axis CNC Wood Turning Lathe Machine for Staircase Manufacturer and Supplier |Apex
Jinan Single Axis CNC Wood Inoshandura Lathe Machine yeStaircase
Single axis cnclathe yehunihaingoshandisirwe 3D kutendeuka uye kubhuroka chete, asi zvakare inoshandiswa 3D kuveza uye kucheka mapatani ane yakawedzera spindle, ikozvino yakanakisa 4 axis CNC.lathe yehunikutengeswa nemutengo unokwanisika.
4 Axis CNC huni lathe Features
1. Heavy cast iron lathe bed.Regedza kuzunungusa kana mota ichitenderera nekukurumidza kune yakakura fomati workpiece process, uye kumhanya kutendeuka kunogona kugadziridzwa kuburikidza ne frequency converter.
2. 4 axis CNC huni lathe ine chuck imwe uye imwe backlash yekugadzirisa zvinhu, imwe spindle yekuveza.
3. 4 axis CNC huni lathe inotora Taiwan Hiwin square guide, yakakwirira chaiyo uye yakasimba.
4. Autocad software iri nyore pakudhirowa madhizaini.
5. LCD control system inoratidza kushanda kwekushanda.
Makolamu echiRoma, tubular akapinza, mbiya inopinza, matanda emotokari, masitepisi, mbiru dzemasitepisi, masitepisi matsva, makumbo etafura, makumbo etafura yekudyira, makumbo ebhawa, makumbo etafura yesofa, makoramu akajairwa, washstand, baseball bats, matanda ematanda, fenicha yemapuranga yemotokari, mbiru dzemibhedha dzevana, macheya, mbiru dzemaoko, simbi dzemibhedha, mbariro dzemarambi, tsoka dzesofa, mabhanzi tsoka uye mamwe masimbi ekugadzira.
Kureba kweMax 100mm-2500mm
Max kutendeuka dhayamita 20mm-300mm
Spindle 3.0KW mhepo inotonhorera spindle ine mota
Nhamba ye axis Kaviri axis, mana blade
Kudzora system DSP
Driving system Stepper mota
Kushandiswa kwesimba rose 5.5kw
Zvose zviyero 4100*1500*1300mm
CNC Wood Router linear ATC yehuni Furniture P...
Nyowani Dhizaini Atc 4 Axis CNC Router MDF Yekucheka Ki...
Kutengeswa kunopisa 2021 Zvakanakisa 1530 CNC Plasma yekucheka mac...
CNC router 1325 saizi 3D modhi 2021 inotengeswa zvakanyanya
2021 Inopisa kutengesa CNC Router Machine ine Double T...
2021 Gore Idzva Dhizaini CNC Wood Lathe Machine ye...